FMBM : hanampy amin’ny famahana ny krizy ny ABU | NewsMada
FMBM : hanampy amin’ny famahana ny krizy ny ABU
Miroso tsikelikely amin’ny famahana ny krizy miantraika aminy ny Fikambanana mampiely Baiboly malagasy (FMBM) etsy Antaninarenina. Misy ny fiaraha-miasa amin’ny Alliance biblique universelle (ABU) amin’ny famoahana ny fikambanana ao anaty krizy.
Nanome Baiboly mitentina 50.000 dolara ny ABU ary 50.000 hafa ihany koa avy amin’ny fikambanana malala-tanana mikirakira Baiboly, raha ny nambaran’ny pasitera Rakotoarivony Lalarinjato Hubert. Tafakatra 100.000 dolara, araka izany, ny tolo-tanana azon’ny FMBM hanarenana ny krizy mianjady aminy.
Raha tsiahivina, dimy volana lasa izay, nisy ny fampitsaharana ny asa ho an’ireo mpiasa maromaro tao amin’ity fikambanana mampiely Baiboly ity. Mbola mitohy ny fanelanelanana ataon’ny mpanara-maso ny asa mahakasika io resaka io.
Fanapahan-kevitra tsy maintsy noraisina anefa izany hampihenana ny vola mivoaka, raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra. Efa voaefa tao anatin’izay dimy volana izay ihany koa ny trosa maika tsy maintsy naverina. Na izany aza, mbola betsaka ny ambiny, saingy mbola afaka miandry taorian’ny fifampiresahana.
Mitohy ny antso ataon’ny tompon’andraikitry ny FMBM amin’ireo fiangonana, olon-tsotra, fikambanana sy ny malala-tanana rehetra hiaraka hanarina ny fikambanana. “Tsy fotoan’ny fifanomezan-tsiny intsony izao fa fotoan’ny fifanomezan-tanana kosa”, hoy ireo tompon’andraikitra.